अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न : विद्युतीय गाडी र चकलेटबाट छताछुल्ल - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न : विद्युतीय गाडी र चकलेटबाट छताछुल्ल - खबर प्रवाह
अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न : विद्युतीय गाडी र चकलेटबाट छताछुल्ल
प्रधानमन्त्री ओलीका त्रिमूर्ति : तीनैजना विवादित
बिहीबार, जेष्ठ २२, २०७७
काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धिका कारण तीव्र आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सोही विषयसँग जोडिएको सूचना चुहावटको विषयले थप विवादमा तानिएका छन् ।
आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धि हुन लागेको सूचना व्यवसायीलाई दिएर राज्यकोषलाई हानी पुर्‍याएको आरोप यतिबेला अर्थमन्त्री खतिवडामाथि लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले यो सवाल संसदमा उठाएसँगै यसको न्यायिक निरुपणको आवाज समेत निरन्तर उठिरहेको छ ।
के के भएको थियो ?
संसदमा बजेट वक्तव्यसँगै जेठ १५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि नयाँ कर र राजश्वका दरहरु प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्तावमा डेढ दर्जनभन्दा बढी सामानहरुको राजश्व तथा करका दरमा समायोजन गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये विद्युतीय गाडीको भन्सार, अन्तशुल्क र सडक कर बढाइएको थियो । यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो भने अन्तशुल्कलाई ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो । त्यस्तै, सडक निर्माण करलाई पनि ४ प्रतिशतबाट बढाएर यो वर्ष ५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
यसो गर्दा विद्युतीय गाडीको मूल्य ७ गुणासम्म बढ्ने अवस्था थियो । नेपालमा आयात भइरहेका गाडीमा यो ५ गुणासम्मको मूल्यवृद्धि थियो । बजेटअघि विद्युतीय गाडी किन्दा भन्सार मूल्यको २९.२७ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । मूल्य बढेपछि १९९.८९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
तर कर वृद्धि हुनुअघिको एक साताभित्र मात्रै भन्सार नाकाबाट ११५ भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएको पाइएको छ । अचम्म लाग्दो त के छ भने तीमध्ये अधिकांश गाडीहरु एमजी कम्पनीका छन् । यो गाडी विशाल ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको पारामाउन्ट मोटर्सले बिक्री गर्दै आएको गाडी हो । नेपालमा उपलब्ध विद्युतीय गाडीहरु बजेटअघि ५० लाखदेखि ६५ लाख रुपैंयासम्ममा बिक्री हुँदै आएका थिए । यो मूल्य २९.२७ प्रतिशत राजश्व र बिक्रेताको नाफा सहितको हो । भारतीय बजारमा सोही गाडीहरु २० देखि २४ लाख भारतीय रुपेयाँ (३२ लाखदेखि ३८ लाख नेपाली रुपैंया) मा बिक्री हुँदै आएको छ । भारतमा यस्तो गाडीमा १२ प्रतिशत जीएसटी मात्रै लाग्छ । त्यसमा बिक्रेताको नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण हुन्छ । नेपालमा उपलब्ध विद्युतीय गाडी व्यवसायीहरुले २५ देखि ३२ लाख रुपैंयासम्म तिरेर ल्याउने गरेको बताइन्छ । पहिले २९.२७ प्रतिशतका दरले प्रतिगाडी औसत ९ लाख रुपैंया लाग्दै आएको राजश्व अब करिब ४५ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यो हिसाबले बजेटअघि छुटेका गाडीले राज्यकोषमा एकैपटक ४० करोड रुपैंया भन्दा बढीको नोक्सान भएको देखिएको छ ।
विद्युतीय सवारीको करवृद्धिलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी मुद्राको सिञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनलाई जोडेर हेरेका छन् । उनको यो तर्क सरकारको नीति अनुरुप नभए पनि व्यवहारिक रुपमा स्वभाविक नै मानिन्छ । सूचना चुहाएको आरोप खतिवडा स्वीकार्न नै चाहँदैनन् । यही तरिकाले उनले संसद र मिडियामा उठेका आवाजलाई टार्दै आएका छन् ।
आरोप प्रमाणित गर्ने आधारहरु
संसद र सामाजिक सञ्जालमा उठेका विषयलाई आधार बनाउने हो भने खतिवडामाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुने प्रशस्त आधारहरु छन् । ती आवाज र तर्कहरुलाई नजरअन्दाज गरेर यो विषयलाई एउटा संयोगको रुपमा हेर्न सकिने अवस्था छैन ।
सूचना चुहावट भएको हो भन्ने आरोप प्रमाणित हुने आधार भनेको अस्वाभाविक आयात नै हो । लकडाउनका कारण अहिले अर्थव्यवस्था नै थिलोथिलो भएको अवस्थामा अटो क्षेत्र अर्को सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र हो । लकडाउनका कारण अहिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको गतिविधि ठप्प मात्रै भएका छैनन्, जनताको क्रयशक्तिमा आउने ह्रासका कारण लकडाउन खुलेपछि पनि यो क्षेत्र तत्कालै सहज अवस्थामा आउने सम्भावना नरहेको बिक्रेताहरु बताउँछन् । ‘लकडाउनका कारण अहिले लाखौं जनसंख्या बेरोजगार छ । रोजगारीका रहेकाहरुको पनि आम्दानी कम छ । स्वास्थ्यसुरक्षाको व्यवस्था गर्दै थोरै कर्मचारीबाट कार्यसञ्चालन गर्नुपर्दा व्यवसायीहरुको लागत बढेको छ । व्यवसाय सञ्चालन नहुादा पनि बहन गर्नुपर्ने स्थिर दायित्वका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु पनि अहिले समस्यामा नै छन्् । यस्तो अवस्थामा गाडीको सहज बिक्री हुने अवस्था थिएन’ एकजना बिक्रेताले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भरपर्दो सूचनाबिना करोडौं मूल्यका गाडीहरु ल्याउने जोखिम कसैले लिन सक्दैन । दुई÷चारवटा भए अलग कुरा नत्र अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव नै छैन । अहिले अर्थमन्त्रीलाई विशाल ग्रुपसँग साँठगाँठ गरेर राज्यकोषको दोहन गरेको आरोप लागेको छ । यसलाई प्रमाणित गर्ने अर्को आधार भनेको चकलेटमा गरिएको भन्सार कटौती पनि हो । यसअघि ४० प्रतिशत लाग्दै आएको चकलेटको भन्सारदर घटाएर अहिले ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । अहिले विदेशी चकलेट र बिस्कुटहरुको आयात र बिक्रीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विशाल ग्रुप अन्तर्गतकै कम्पनीको छ । क्याटवरी, किटक्याट लगायतका दर्जनौं नामका विदेशी चकलेटहरु वार्षिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा यो समूहले बिक्री गर्दे आएको छ । १० प्रतिशत भन्सार घटाउँदा मूल्य यथावत रहेको अवस्थामा पनि सो समूहले २५ करोड रुपैंया भन्दा बढीको नाफा कमाउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा चकलेटको भन्सार घटाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन । न त यो कुनै अत्यावश्यक वस्तु हो, न त नेपालमा उत्पादन नै हुन नसक्ने वस्तु नै । विभिन्न कम्पनीहरुले नेपालमै राम्रो गुणस्तरका चकलेटहरु उत्पादन गर्र्दै आएका छन् । नेपालकै दुग्ध पदार्थ र कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने यस्ता चकलेटको उत्पालनले अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना समेत गरेको थियो । यसका वाबजुद पनि यसमा मूल्य घटाइएको छ । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि सबैभन्दा ‘निरंकुश’ बनेको मन्त्रालय नै अर्थ मन्त्रालय हो । कर्मचारीहरुको भनाइ मान्ने हो भने सो मन्त्रालयमा हरेक कर्मचारीको निगरानी सुक्ष्म रुपले गरिएको हुन्छ । सीसीटिभीबाट अनुगमनदेखि मोबाइल ट्यापिङ गरेर समेत गतिविधिहरु निगरानी हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैले कर्मचारीहरु फोनमा खुलेर कुरा गर्दैनन् । भाइबर, ह्वाट्सएपमा आएपछि मात्रै उनीहरुको बोली खुल्छ । बजेट बनाउनुभन्दा २ महिना अघिदेखि मन्त्रालयमा पत्रकार र अरु नयाँ व्यक्तिलाई प्रवेशमा निकै कडाइ गरियो । मातहतका निकायलाई सूचना नदिन निर्देशन दिएर केन्द्रिकृत रुपमै सूचना लुकाउने कामसमेत अर्थ मन्त्रालयले गर्यो । तर जुन कुरा गोप्य हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ सम्बन्धित मान्छेसम्म पुग्यो र यसले करोडौं क्षति समेत व्यहोर्नुपर्यो । एकजना पूर्वअर्थमन्त्री यसरी सूचना चुहिनुमा अर्थ मन्त्रीकै संलग्नता देख्छन् । ‘मन्त्री इमान्दार भए सचिवले बदमासी गर्न सक्दैन, सचिवहरु इमान्दार भए अरु कर्मचारीहरुले बदमासी गर्न सक्दैन । त्यसैले यसको नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’ ती पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्, ‘हामी सरकारमा हुँदा कसैसँग टाढा नभएरै पनि, मन्त्रालयमा भीडभाड नै भए पनि गोप्य कुरालाई गोप्य नै राख्यौं । मन्त्रालयको ढोका बन्द गरेर बनाएको यो बजेटमा अर्थमन्त्री चुक्नुभयो ।’
ज्वाइँसँगको साँठगाँठमा सूचना लिक ?
अर्थमन्त्री खतिवडासँग जोडिएको अर्को शंकास्पद विषय भनेको आफ्नो ज्वाइँप्रतिको उदारता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक रहेका डा. रामशरण खरेल बजेट निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी थिए । अहिले पनि उनकै साँठगाँठमा व्यवसायीसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । त्यसो त सुरुदेखि नै डा. खरेलको इतिहास निकै विवादित छ । तर उनले खरेललाई निरन्तर पुरष्कृत गर्दै आएका छन् । युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिको रुपमा खतिवडाले उनलाई पठाएका थिए । निर्देशक तहको व्यक्ति पठाउनुपर्ने उक्त स्थानमा खरेल उप–निर्देशक रहेकै अवस्थामा गएका थिए । त्योबेला यो काण्ड निकै विवादित बनेको थियो ।उपनिर्देशकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरको प्रमुख रहँदा खरेल अर्को काण्डमा मुछिए, त्यो हो नोट काण्ड । थोत्रा नोटहरु जलाएको भनेर नजलाइकनै अपचलन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै संरक्षणमा उनीमाथि कुनै पनि कारबाही अघि नबढेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । त्यसरी विवादित बनेका खरेललाई अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त समेत गरे । अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेखेर काजमा पठाउन निर्देशन दिएर उनलाई मन्त्रालयमा भित्र्याइएको थियो । उनलाई अर्थशास्त्रीको रुपमा नियुक्ति दिने चाहना भने प्रधानमन्त्रीको असहयोगपछि असफल भएको बताइन्छ ।
गत वर्ष बजेट निर्माणपछि उनी नेपाल राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए । राष्ट्र बैंक फर्किएलगत्तै उनी निर्देशक पदमा बढुवा भए । अहिले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत खरेल बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्न भन्दै मन्त्रालय आएका हुन् । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकमै रहे पनि उनी राष्ट्र बैंकका लागि भन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयकै लागी काम गर्ने गर्थे । लकडाउनको अवधिमा ‘वर्क फ्रम होम’ व्यवस्था लागु भएका कारण उनले आधिकारिक सूचनाबिनै बजेट निर्माणमा सहभागी हुन थाले । व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेर सूचना चुहावटको आरोप उनैमाथि लाग्दै आएको छ ।
ओलीका त्रिमूर्ति : तीनैजना विवादित
हालको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने व्यक्तिहरुमध्ये एक हुन् डा. युवराज खतिवडा । टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त उनीसहित गोकुल बाँस्कोटा र भानुभक्त ढकाल ओलीका विश्वासपात्र हुन् । जुनबेला चाह्यो, उहीबेला भेट्नसक्ने किचन क्याबिनेटका सदस्यको रुपमा उनीहरुलाई हेरिन्छ । तर पछिल्लो समय ओलीका विश्वासपात्रको छवि धुमिल हुँदै गएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद प्रकरणमा ७४ करोड रुपैंयाको भ्रष्टाचार काण्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले तात्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । तर उनको यो विषयलाई अख्तियारले हेरिरहेको बताइए पनि अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दायर भएको छैन । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी ग्रुपसँग साँठगाँठ गरेर महँगोमा सामान आयात गरेको आरोपमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल निकै विवादमा तानिए । तर उनको यो प्रकरणलाई पनि अहिले ओझेलमा पारिएको छ । राष्ट्रिय चासोको विषय रहेको उक्त प्रकरणलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकलाई जिम्मेवारी थोपरिदिएर यतिबेला उनलाई चोखो बनाउने प्रयास गरिएको छ । नीतिगत निर्णयमा निकै असहमतिबाहेक नीतिगत भ्रष्टाचारमा खतिवडा अहिलेसम्म देखिएका थिएनन् । तर राजश्व चुहावटको यो काण्डले उनीमाथि पनि ‘कलंकको टीका’ लागेको छ । त्यसो त यो प्रकरण पनि सेक्युरिटी प्रेस र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणजस्तै न्यायिक निरुपणमा पुग्ने सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ । तर, डा. खतिवडालाई इतिहासले प्रश्न भने सोधिरहनेछ, ‘करको सूचना चुहाएर कति लाभ लियौं ?’
मादक पदार्थ सेवन गरेका वडाध्यक्षलाई स्थानीयवासीले राखे क्वारेन्टिनमा
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार , भोलि यूएई र म्यानमारबाट ल्याइने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का नेताहरु ओलीलाई नै पुन प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य पारेको बताएका छन् । ओली एक कुशल नेता भएकाले नेकपामा उनको विकल्प नभएको बताए । एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै रिमालले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतले प्रधानमन्त्री […]
कपिलवस्तु । जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।जिल्ला स्तरीय संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारी कार्यालय,बैंक तथा वित्तीय कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा र सार्वजनिक यातायातका सेवा शुक्रबारबाट पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । साउन २३ गते बिहान ५ बजेदेखि ३२ गते राति १२ […]
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारको बाहिरी घेरामा खटिएका ६ जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । बुधबार निवासमा कार्यरत सबै सुरक्षाकर्मी तथा अध्यक्ष प्रचण्डको परिवारका सबै सदस्यको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । जसमा ६ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको हो । सुरक्षाकर्मीमा […]
काठमाडौं। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा बिद्रोह हुने संकेत गरेका छन् ।प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालकाे समुहले बिद्रोह गर्ने संकेत देखाएका हुन् ।उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने समेत बताएका छन । सरकार र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गलत बाटोमा लागेको भन्दै अब कुरेर बस्ने समय नभएको समेत बताएका छन् ।नेता खनालले […]
कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलदेखि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसम्मलाई भेटेको खुलेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं आएका मन्त्री यादव आइतबार मात्रै प्रदेश फर्किएका थिए । काठमाडौंमा रहँदा उनी प्रधानमन्त्रनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनले नेपाल प्रहरीको संगठन […]
स्याङ्जा ।राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल स्याङ्जाका नेताहरु काँग्रेस प्रबेश गरेका छन् । युवा संघ नेपाल जिल्ला समिति सदस्य विक्रम पोख्रेल सहितका युवा नेताहरु काँग्रेस प्रबेश गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस स्याङ्जाले पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. ४ गौतमडाँडामा गरेको कार्यक्रम युवा संघका नेताहरु काँग्रेस प्रबेश गरेका हुन् । प्रबेश गरेका युवाहरुलाई काँग्रेस स्याङ्जाका कार्यबहाक अध्यक्ष कुमार […]